Abazali Bakhokelela ekukhuliseni intsana yaseColicky
by UDkt. Rita Louise, Ph.D.
Iingcebiso Zokuphila Kwabazali Bantwana Abantwana Abandezelekayo ngeColic
I-Colic ingxaki eqhelekileyo kwiintsana kunye nesimo esinzima ngakumbi kubazali ukuba bajongane nayo. Phantse kwi-10 ukuya kuma-30 ekhulwini yazo zonke iintsana ezelwe ziza. Ukuba usana luya kubakho ubomi kubomi balo, luya kubonakala kwiiveki ezimbalwa zokuqala zobomi kwaye luya kugxotha ngelixa umntwana useneminyaka emine ubudala. Iintsana ezinokukhula kunye nokuphuhlisa ngokuqhelekileyo kwaye akunakwenzeka into ebangela iingxaki zangaphambili okanye zokuziphatha.
Indlela yokuchonga umntwana weColicky
Ixesha elithi colic libhekisela kwimeko apho umntwana usenokukhala ngokungahlaliyo ukusuka kwiyure ukuya kwiiyure ezine. Ngokuqhelekileyo ukupeliswa kufaneka ngokukhala okukhulu okuqhubekileyo okuqhubekayo. Umntwana unako ukukrazula imilenze yakhe ukuya esiswini sakhe njengokungathi ubuhlungu besisu okanye imilenze yabo inokwenziwa ngokuthe ngqo. Ngokuqhelekileyo izandla zentsana zifakwe. Basenokubamba ukuphefumla kwabo okanye i-grimace. Ngokuqhelekileyo ubuso babo buya kugubha, ngelixa iinyawo zabo zihlala zibandayo. Ezi ziqendu zingenzeka nanini na, kodwa zivame ukuqala ngentambama okanye ngokuhlwa.
Okwangoku, akukho nto ebonakalayo ye-colic, kodwa oogqirha baye bafumanisa iinkalo ezininzi ezenza imiqondiso ye-colic ibe nzima nakakhulu. Ezi ziquka ukutya okukhawulezileyo okanye ukuphelisa, ukugwinya umoya ogqithiseleyo, intlungu ye-intestinal, ukungabikho kwe-burping okanye ukutya kokutya. Oogqirha bayaqaphela ukuba indawo egcwele umsindo, ukukhungatheka okanye kunye nokuzonwabisa kunokudlala indima kule ngxaki.
Nceda uqaphele: Kubalulekile ukuba bonke abazali baqhagamshelane nezingane zakudala zabo kwiimpawu ze-colic-like. Kubalulekile ukulawula ezinye izikhalazo zempilo ezinjengezifo zendlebe, ukunyamezela, ukukhutshwa kwamathumbu, intsimbi okanye ikhwepha kweso lesana.
Iziphakamiso zeZingcebiso zokuPhatha iClicky Babies
Jonga ukutya kwakho kweziphuzo ze-caffeinated ezifana nekhofi, itiye kunye ne-soda.
Yeka ukutya iimveliso zobisi kwiveki enye ukuze ubone ukuba umntwana usabela njani kwiprotheni yobisi oye wayidla.
Ukunciphisa okanye ukuphelisa ukutya kwegesi ezifana nerusi ye-orange, iklabishi (kunye nokutya okuvela kwintsapho yeklabishi), iimbotyi, i-broccoli kunye no-anyanisi.
Phuza i-herb teas teas ezifana ne-chamomile tea ukuze uzinqabise kunye nosana.
Ukuba umntwana wakho uyasondeza i-formula:
Tshintsha uhlobo lwefomula okanye uhlobo lwamanzi asetyenziswayo. Ungaphinda uzame ukutshintsha kwi-formula ye-allergies ephantsi okanye utshintshe kwi-soy esekelwe kuyo.
Qinisekisa ukuba umntwana wakho ufumane ukutya okwaneleyo. Hlola ubungakanani bomda weengono ozithenge. Ukuba izimbobo zincinci, zandise.
Iziphakamiso ezingakumbi kwi-Colicky Baby yakho
Bholela umntwana wakho emva kweyunithi nganye yefomula okanye yonke imizuzu embalwa.
Ukunciphisa ukuba umntwana wakho ugxobhoze umoya, makhe ahlale apho kunokulala phantsi xa edla.
Ukunyakaza ngokuphinda kancinci kuya kuthobisa ezinye iintsana. Zama ukuthatha ukukhwela emotweni okanye ukuhamba epakini. Bawagubungele esihlalweni sokugungqa okanye ukugubha ngokuzulazula kwaye uzame ukuxhoma isantya sawo esincinci kwisitya sokumisa impahla okanye i-dishwasher.
Izandi zinokukunceda ukuhlalisa umntwana ocolicky. Abazali abaninzi baye bafumana uxolo ngokudlala umculo ococekileyo, beqhuba umcoco wabo wokucoca okanye i-dryer yabo.
Ukushisa okusetyenziswayo kunokukunceda. Beka umntwana wakho phezu kwebhotile yamanzi efudumele ebushushu ehlanganiswe ngethawula okanye ezama ukumnika ibhedi yokutshisa. Yongeza amaconsi ambalwa e-chamomile okanye i-marjoram ioli efunekayo emanzini ukubanceda baphumelele.
I-chambal chamalile inomlando omdala wokuthoba umntwana kunye nokunciphisa intlase yomzimba.
Iifom ezenziwe ngeengcambu ze-licorice, i-catnip, okanye i-fennel ziye zafunyanwa ukuncedisa.